Guryihiina Iska Jooga Haddii Aydaan Cadaadiska Old Trafford U Adkaysan Karin- Mourinho Oo Weerar Cusub Ku Qaaday Ciyaartoyda Kooxdiisa Man United. - Gool24.Net
Guryihiina Iska Jooga Haddii Aydaan Cadaadiska Old Trafford U Adkaysan Karin- Mourinho Oo Weerar Cusub Ku Qaaday Ciyaartoyda Kooxdiisa Man United.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaan wali joojin eedaymihii layaabka lahaa ee uu u soo jeedinayay ciyaartoyda kooxdiisa wuxuuna markan u sheegay in ciyaartoygii aan u adkaysan karin cadaadiska Old Trafford in uu gurigiisa iska joogo.
Manchester United ayaa caawa soo dhawayn doonta kooxda Young Boys ee kulanka shanaad ee heerka Groupyada Champions League wuxuuna Mourinho doonayaa in ayna markale natiijo xun kula kulmin Old Trafford oo ay ku soo dhibtoonayeen.
Man United ayaa xili ciyaareedkan dhibco badan ku lumisay garoonkeeda Old Trafford iyada oo Mourinho la waydiiyay haddii Old Trafford yahay mid dhibaato iyo cadaadis ku abuuraya ciyaartoyda kooxdiisa wuxuuna Mourinho ku dooday in jamaahiirta iyo garoonka laftiisa ay taasi ixtiraam daro ku tahay.
Markii Mourinho la waydiiyay haddii Old Trafford uu cadaadis ku abuuro ciyaartoyda kooxdiisa Manchester United ayuu yidhi: “Anigu waan iska diiday in aan taas sheego. Waxaan filayaa in ay ixtiraam daro ku tahay garoonka iyo taageerayaasha in aan sheegno in aanu door bidnayso ku ciyaarista martida, sidaa daraadeed, gabi ahaanba waan diiday in aan sidaa sheego”.
Jose Mourinho oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ‘Haddii aad i waydiiso in aan anigu door bidayo in kulanka Young Boyes aan halkan ku ciyaaro ama aan tago Bern, waxaan markiiba kuu sheegayaa in markasta ay tahay ku ciyaarista guriga”.
Intaa kadib Mourinho ayaa fariin adag u diray ciyaartoyda kooxdiisa wuxuuna yidhi: “Haddii aad caddaadis dareento, kadib guriga iska joog, marka aan sheegayo guriga, ma sheegayo guriga garoonka, waxaan sheegayaa guriga-guriga ah oo TV-ga daawo”.
Mourinho ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Goormay dadku u imanayaan in ay ku taageeraan? ka soco, anigu cadaadis ma dareemo in aan guriga ku ciyaaro”.
Haddii ay Manchester United goolal ka dhalin waydo kulanka caawa ee Champions League ee Young Boys waxay noqon doontaa markii ugu horaysay ee ay Old Trafford saddex kulan oo xidhiidh ah goolal ku dhalin waayeen maadaama oo ay Valencia iyo Juventus goolal ka soo dhalin kari waayeen.